I-Atherossteotic plaque ku-carotid artery: izimpawu nokwelashwa > Isifo sikashukela
Ngabe i-carotid arteriosulinosis ibonakaliswa kanjani?
Ngemithambo ye-carotid, ukunikezwa kwegazi kuzo zonke izitho zekhanda, kufaka phakathi ubuchopho, kuyenzeka. Futhi inkinga enkulu ama-plaque ku-carotid artery, ukwelashwa okufanele kuqalwe ngokushesha.
Izindawo ze-atherossteotic zivela ngenxa yezici eziningi. Imvamisa, i-atherosclerotic plaque iqukethe i-cholesterol, enama-lipoprotein aphansi kwabantu, kepha kwesinye isikhathi aqukethe imali ebaliwe.
Amapherishi e-atherossteotic aphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile, okubangela indlala yomoya-mpilo.
Izimbangela zezigcweti ze-atherosclerotic ku-carotid artery yile:
ukungondleki, ukudla ngokweqile okunamafutha,
ukuntuleka komzimba omncane kakhulu,
Njengoba iningi labantu abadala linokuntuleka kokuzivocavoca umzimba nokuhlukumeza ukudla okusheshayo, cishe wonke umuntu usengozini.
Izici ezilandelayo zingaba nesandla ekutholakaleni kwe-cholesterol plaque emthanjeni we-carotid kanye nokwanda kwawo ngokushesha:
iminyaka Kubantu asebekhulile, inani le-collagen lehla kakhulu, okuholela ekuwohlokeni kokuqina kwezindonga zemithambo yegazi,
ingcindezi engapheli. Ngenxa yomthwalo owengeziwe emikhunjini, ukuqina kwawo kuncipha, nezindonga zithathwa kalula yi-microtrauma,
isifo sikashukela mellitus. Ubungozi bokuqalwa i-atherosclerosis banda kakhulu uma isiguli sinesifo sikashukela. Ku-mellitus yesifo sikashukela, umzimba awukwazi ukudiliza i-glucose ngokuzimele; ngenxa yalokho, amandla okwehla kwe-lipoproteins ephansi ayancipha,
ukumisela ifa. Uma emndenini kuke kwaba nezimo zokuthuthuka kwalesi sifo, khona-ke ubungozi bukhula kakhulu.
Izimpawu zokubonakala kwama-plaque ku-carotid artery yile elandelayo:
ukuphazamiseka kokulala. Isiguli asikwazi ukulala isikhathi eside, sihlushwa amaphupho amabi,
i-migraine Ubuhlungu bekhanda kwenzeka ngenxa yokuntuleka njalo komoya-mpilo, ngakho-ke i-migraine ibhekwa njengophawu oluphambili lwe-atherosclerosis,
ukukhathala. Ama-cholesterol plaques aphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile, yingakho ukungondleki kwengqondo kuthinteka. Ngenxa ye-hypoxia engapheli, ukukhathala komzimba nangokwengqondo kuyabonakala,
i-tinnitus, umuzwa wobunzima ekhanda.
Uma okungenani unezimpawu ezimbalwa, khona-ke umuntu kufanele acabange ngempilo yakhe futhi ahlolwe nodokotela wakhe.
Ezimweni ezisezingeni eliphakeme, isiguli singathola ukuhlaselwa ngezikhathi ezithile kwe-ischemic. Ngezimpawu, ifana kakhulu nesifo sohlangothi futhi ingahlala cishe usuku. Kulokhu, ukuvakashela udokotela kufanele kube ngokushesha, ngaphandle kwalokho ngokuzayo kungaba yisifo sohlangothi sangempela.
Imiphumela engaba khona
Umphumela onzima kunayo yonke we-arteriosclerosis ye-artery unhlangothi.
Izinketho zokuthuthuka zalesi simo zingahluka kakhulu, noma kunjalo, imiphumela iyadabukisa kuzo zonke izimo:
ukwehla ekunikezelweni kwegazi kuya ebuchosheni. Ngesinye isikhathi, ukumpompela kwegazi kuyeka cishe ngokuphelele, bese kuthi ubuchopho be-hypoxia,
ukuqhekeka kwemikhumbi emincane. Endabeni yokuqhuma kwepulangwe, ucezu luqala ukuhamba ngemikhumbi. Uma ingena emgodini wegazi omncane, khona-ke izovalwa ngaso leso sikhathi, okuholele ekufeni kwale ndawo,
ukwakheka kwegazi Uma ukuvuvukala kwegazi kukhulu, khona-ke kuba nesifo sohlangothi ngenxa yokwephulwa kokuhlinzekwa kwegazi.
Ama-atherosulinotic plaque asabela kahle ekwelashweni, kepha iningi inkinga inkinga yokuxilongwa kwalesi sifo. I-Atherossteotic plaque isikhathi eside azivezi nganoma iyiphi indlela, kepha imiphumela ingaba yingozi emzimbeni womuntu.
Ukulawula inani le-cholesterol esegazini, udinga ukuhlolwa kwegazi njalo. Inani le-cholesterol emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, izindlela ezengeziwe zokuxilonga ziyasetshenziswa:
I-Doppler ultrasound, ekuvumela ukulandelela ukuhamba kwegazi kanye nokwakheka kwezindonga zemithambo yegazi,
i-computer tomography. Le ndlela ikuvumela ukuthi uhlole isimo sengqimba ngayinye yezicubu lapho i-artery iqukethe. Ukuze uthuthukise isithombe, umenzeli okhethekile ohlukile ufakwa ohlelweni lokujikeleza,
i-magnetic resonance therapy. Ngosizo lwayo, ijubane lokuhamba kwegazi linqunywa hhayi kuphela emthanjeni we-carotid, kodwa futhi nemithambo emincane.
Uma izimpawu zisanda kuqala ukuzibonakalisa, khona-ke ukwelashwa, njengoba kunjalo, akudingekile.
Kulokhu, kwanele ukusebenzisa izindlela zokuthintela:
ukulungiswa komsoco. Ukudla kufanele kube njalo, kuphekwe kathathu - okungenani amahlandla ama-5 ngosuku. Ukudla nakho kudlala indima enkulu. Kuyadingeka ukuqeda ngokuphelele noma okungenani kunciphise ukudla okugcwele i-cholesterol noma okubandakanya ikakhulu ama-carbohydrate agaya ukudla kalula: iziphuzo ezinoshukela ezinekhabhoni, inyama ebhemayo, amaswidi, noma yikuphi ukudla okuhleliwe. Kufanelekile futhi ukushiya ikhofi (ikakhulukazi manje) notshwala,
uyeke ukubhema, ngoba i-nicotine yehlisa i-metabolism kanye nokugeleza kwegazi emithanjeni,
zivocavoca umzimba njalo. Ukuvivinya umzimba njalo kusiza ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi, futhi kusheshise imetabolism futhi kusiza ukusheshisa ukudluliselwa kwe-oksijini ngemithambo yegazi.
Njengokwelashwa kwezidakamizwa, izidakamizwa zisetshenziswa okuhloswe uku:
ukuncipha kwegazi. Izidakamizwa ezinjalo zivimbela ukwakheka kweziqeshana zegazi - okuyingozi enkulu ekwakhiweni kwe-atherosclerosis. Umuthi ovame kakhulu yi-acetylsalicylic acid (Aspirin) ejwayelekile,
ukwehlisa umfutho wegazi, isibonelo, iFosicard, i-Amlodipine, iRenipril nabanye,
ukwehla kwenani le-cholesterol emikhunjini - Atorvastatin, Cardiostatin,
ukuqiniswa kodonga lwe-vascular - Piracetam, Riboxin, Ascorutin,
ama-painkiller uma kunesidingo, ngokwesibonelo, i-Ibuprofen.
Uma ama-plaque asemthanjeni we-carotid akhula ngokushesha okukhulu, anciphisa ngokushesha ukukhanya kwethambo emthanjeni we-carotid, udokotela angancoma ukungenelela kokuhlinzwa. Usebenzisa umsebenzi, ungasusa amadiphozithi akhona, ngaleyo ndlela ukhulisa usayizi wediphozithi.
Kunezinhlobo ezimbili zokuhlinzwa:
i-carotid endarterectomy - ukususwa kwama-cholesterol plaque emthanjeni kusetshenziswa amathuluzi okuhlinza. Le ndlela yiyona evame kakhulu. Udokotela ohlinzayo wenza i-artery ku-carotid artery, asuse ama-atherosulinotic plaque. Lo msebenzi uthathwa njengempumelelo kakhulu ekulweni nesifo sohlangothi,
i-carotid angioplasty ne-stenting - ukukhuphuka kobubanzi be-lumen besebenzisa i-stent. Lolu hlobo lokusebenza lwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. I-catheter ifakwa emthanjeni we-carotid, okufakwa kuwo ibhaluni. Kancane kancane i-Yehova ingakhula, ngaleyo ndlela kwandise imvume. Inqubo iphindwa kaninginingi.
Yini ama-atherosclerotic plaque asemithanjeni ye-carotid?
Omunye wemikhumbi emikhulu yi-carotid artery. Kuqala esifubeni sesifuba. Lesi isitsha esingamawele. Imithambo ye-carotid eye kwesokunxele nakwesokudla ihlukaniswa. Bahlukaniswe ngamagatsha ama-2. Imithambo ye-carotid engaphakathi nangaphandle inikela ngegazi ebuchosheni, emehlweni nakwezinye izinto zekhanda. I-Atherossteosis yisifo esingelapheki esithathelwanayo esihambisana nokungasebenzi kahle kwama-metabolism.
Le pathology iyingcuphe yokuthuthuka kwe-hypertension kanye ne-acute cerebrovascular ngengozi. I-Atherossteosis yendawo futhi ihlelekile. Eminyakeni yamuva, inani leziguli likhuphuke kakhulu. Isizathu siyindlela engalungile yempilo. Iqembu lengozi lifaka abesilisa abaneminyaka engama-45. Abesifazane bagula kaningi amahlandla ama-3-4. Le pathology ithatha isikhundla esiphambili ekwakhekeni kwezimbangela zokukhubazeka kwabantu. Namuhla, lesi sifo sivame ukutholakala kubantu abasha.
Izici eziyinhloko zokuzimela
Kunezizathu eziningana zokunqotshwa kwemithambo ye-carotid. Izici ezilandelayo zibamba iqhaza ekwakhiweni kwe-atherosulinosis:
ukubhema nje okusebenzayo nokusebenzayo kogwayi kanye nama-hookah,
ukuntuleka komsebenzi wezimoto,
Imvamisa lesi sifo sivela kubantu abangondlekile. Okubaluleke kakhulu ukusetshenziswa kabi kokudla okune-lipids yezilwane nama-carbohydrate alula. Izinhlobo ezinonile ezinenyama nenyama, imayonnaise, izicubu, ibhotela, ukhilimu omuncu, i-confectionery, ama-pastry, amasangweji kanye neqanda leqanda kusithinta kabi isimo semithambo ye-carotid. Ukweqisa kumenyu yale mikhiqizo kuyinto ebeka engcupheni ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis.
I-Nicotine ne-tar equkethe intuthu kagwayi kunomthelela ongemuhle emithanjeni yegazi. Emncane, i-atherosclerosis ingaba ngumphumela wokungasebenzi komzimba. Intsha ihamba kancane, ithanda ukushayela imoto, ihlale isikhathi eside ekhompyutheni naku-TV. Konke lokhu kuholela ekuphanjukeni komzimba kanye nokuphazamiseka komzimba.
Abantu abadlala ezemidlalo mancane amathuba okuba bahlaselwe yi-atherossteosis. Isici sobungozi umfutho wegazi ophakeme. Inomthelela kumonakalo odongeni olungaphandle futhi kusiza ukumuncwa kwe-endothelium ngamafutha. Ngokukhula kweminyaka, isilinganiso sezehlakalo siyakhuphuka. Isizathu inqubo yemvelo yokuguga. Ukubaluleka okukhulu ekwakhiweni kwe-atherosulinosis yemithambo ye-carotid kudlalwa yizici ezinjengokuthola ifa, idyslipidemia kanye nomonakalo odongeni lwe-vascular.
I-Pathogeneis yentuthuko yalesi sifo
Indlela yokwenza ukwakheka kwama-atherosselotic plaque iyinkimbinkimbi kakhulu. Kunezigaba ezi-3 zokuthuthuka kwalesi sifo. Isisekelo isisekelo segobolondo langaphakathi le-carotid artery of atherogenic lipids. Lezi zokugcina zifaka i-LDL ne-VLDL. Thinta kahle imithambo yegazi ephezulu yokuxinana kwama-lipoprotein. Lapho isilinganiso se-LDL siye kwi-HDL siguqulwa siqonde endaweni yangaphambili, okunamafutha amabala ezindongeni.
I-atherossteosis iyakhula. Esigabeni 1, ama-lipoprotein e-atherogenic afakwa. Inomthelela kulomonakalo odongeni lwemithambo yegazi nokuncipha kokugeleza kwegazi. Izindawo zeLipid aziphazamisi ukuhamba kwegazi emithanjeni. Ziyabonakala ngaphansi kwesibonakhulu. Uma ukwelashwa kungenziwa, kuhlangana isigaba 2. Ibizwa nge- lipossteosis.
Ezindaweni zokufakwa kwamafutha, izicubu ezithintekayo ziyakhula. Amathafa aqala ukwakha. Athambile futhi ancibilika kahle. Kulesi sigaba, kunobungozi bokuthuthukisa i-embolism yamafutha. Isimo sodonga lwe-vascular siyashintsha futhi. Kuba kancane nokunwebeka. Kwakhiwa iziphambeko ezinhlobonhlobo, okubuye kwandise isimo.
Kulesi sigaba, izingcezu zegazi zivame ukwakheka. Isifo se-Stage 3 sibizwa nge- atherocalcinosis. Izinguquko ziba ezingenakulungiswa. Imithi ngeke isakwazi ukunyakazisa ama-plaque, njengoba lawo mva eba mnene.
Isizathu ukuvezwa kukasawoti we-calcium. Amathafa akhuphuka ngosayizi, anciphisa ukucaciswa kwemithambo ye-carotid. Lokhu kuholela ekunciphiseni kwabo. Kukhona ubungozi be-occlusion, obanga i-ischemic stroke kanye nokungaboni.
Sinjani lesi sifo?
Izimpawu zesifo azenzeki ngokushesha. Isigaba se-lipid stain sinokuhlala iminyaka eminingana.
Izimpawu zivele ngokuncipha okukhulu (ngaphezu kwe-50%) ku-lumen ye-carotid artery. Ukwehlulwa kuyinto eyodwa kanye nobumbano. Ukuboniswa okulandelayo kwalesi sifo kungenzeka:
iminyene ngenkathi idla.
Ezigabeni zokuqala ze-atherosulinosis zemithambo yangaphakathi ye-carotid, izikhalazo azinakwa. Izimpawu zenzeka ngezikhathi ezithile. Ngemuva kokuphumula, isimo siyathuthuka. Esigabeni sokuthuthuka, izimpawu ziyaqina. Mhlawumbe ukubukeka kokuqhaqhazela emilenzeni. Inkulumo iyaphazamiseka. Zonke lezi zimpawu kungenxa yokushoda komoya-mpilo.
Esigabeni sokubuyiselwa kwemali, kuphulwa amakhono we-enestic (inkumbulo, ukucabanga, amandla okukhumbula). Abantu abanjalo badinga ukunakekelwa kwabathandekayo. I-atherossteosis ingadala i-paresis nokukhubazeka. Ingozi yokuhlaselwa i-ischemic stroke iyanda. Ukuhlaselwa kwesikhashana kwe-ischemic kuvame ukukhula. Izimpawu ziyanyamalala phakathi nosuku. Esithombeni sabo somtholampilo, ukuhlaselwa kwesikhashana kufana nesifo sohlangothi.
Imiphumela ye-arteriosulinosis yemithambo yegazi
Ngezilonda ze-atherosclerotic zemithambo ye-carotid, i-occlusion kungenzeka. Lesi yisimo esiyingozi, esibonakaliswa ngokuqhuma okugcwele noma okuyingxenye kwe-lumen yemikhumbi epheka ubuchopho. Ngaphezu kwe-50% yamacala we-ischemia we-cerebral kungenxa yomonakalo emithanjeni ye-carotid. Ngokuphikisana nesizinda sokwehla kwe-lumen yemithambo yegazi, ukushoda kwe-oksijini nezakhi zomzimba kwenzeka.
Imvamisa, abantu abanjalo baba ne-dyscirculatory encephalopathy. Izici zayo eziphambili yile:
ukukhathala ngesikhathi sokusebenza komzimba,
ukucabanga okungahambi kahle
Ezigabeni zakamuva, ubuhlakani buncipha. Ukuwohloka komqondo kuvame ukukhula. Amakhono okuzenzela ayalahleka. Abantu abagulayo baba nokungakhathali futhi bangabi nandaba nakho konke. Intshisekelo kokuzilibazisa ilahlekile. Ukuhamba kwehlisa ijubane. Izimpawu ze-automatism yomlomo, ukubanjwa kokuqina kwezifo zomzimba, i-paresis, ukukhubazeka komzimba, ukuvuvukala komgogodla, ukuwohloka kobuchopho, isifo se-pseudobulbar kanye nokuqhaqhazela kuvela ezigabeni ezi-3 ze-encephalopathy ngokumelene nesizinda se-atherossteosis.
Ngokuthuthuka kokuhlaselwa kwe-ischemic kwesikhashana, kuvela ukuphazamiseka kwesikhashana. Izimpawu ezilandelayo zingenzeka:
ukulimala okubukwayo okukodwa,
ubungqabavu bobuso noma izandla,
ukubonakala kwamabala phambi kwamehlo,
kwehlise i-acuity ebonakalayo.
Ukuvinjwa okuphelele ngemuva kwesizinda sezilonda ze-atherosulinotic of the carotid artery eba ku-1% yamacala. Nge-atherossteosis, imiphumela elandelayo iyenzeka:
ukulahleka kokunyakaza emilenzeni
i-paresis yezinzwa yobuso,
Izinguquko ezenzeka ebuchosheni,
I-prognosis iba mubi kakhulu uma umuntu ogulayo engalashwa ngesikhathi.
Amasu wokuhlola nokwelashwa
Nge-atherossteosis, izifundo ezilandelayo ziyadingeka:
I-Dopplerography yemikhumbi yobuchopho nentamo,
ukuhlolwa kwegazi ngokujwayelekile nangokuphilayo,
magnetic resonance noma i-computer tomography.
Ngaphezu kwalokho, kuhlolwa isimo senhliziyo nemikhumbi ye-coronary. Iziguli zidinga ukwelashwa ngemuva kocwaningo nokuhlolwa. Udokotela wakho kufanele alinganise umfutho wegazi lakho. Ngokuphazamiseka okubukwayo, ukuhlolwa kwe-ophthalmological kuyadingeka. Indlela yokwelapha i-atherosclerosis yaziwa yiwo wonke umuntu owelapha ngokuhlinzwa kanye nodokotela oyi-neurologist.
Ukuyeka ukubhema notshwala.
Ukwanda kwemisebenzi yezimoto.
Ukulandela ukudla okuqinile.
Ukuthatha ama-statin neminye imithi.
Ngokuthuthukiswa kwe-thrombosis, ama-antiplatelet agents nama-anticoagulants anqunyelwe. Kwi-atherossteosis, kubalulekile ukwenza kube ngokwejwayelekile i-lipid spectrum uma amazinga wegazi e-LDL, VLDL, noma ama-triglycerides ephakanyisiwe.Kulokhu, kunqunywa ama-statin. Lokhu kufaka phakathi i-Aterostat, i-Liprimar, iTorvakard, i-Atorvastatin-Teva, i-Atoris, i-Simvastatin Zentiva, iVasilip, i-Simvor, i-Pravastatin, i-Livazo, i-Rosucard, i-Tevastor, i-Roxer, i-Krestor, i-Holetar, i-Cardiostatin, i-Rovakor, i-Vero-Lovolastatin kanye ne.
Izicucu zivame ukunqunyelwa. Uma kutholakala izinguquko ze-atherossteotic, khona-ke awunakukwenza ngaphandle kokudla. Udinga ukulahla i-offal, amasoseji, ukhilimu omuncu, ibhotela, inyama enamafutha, imayonesi, izicubu, ukudla okusemathinini, isikhuphasha seqanda, amaswidi kanye nesinqe. Kuyadingeka ukunciphisa ukusetshenziswa kosawoti nemikhiqizo yokubhaka. Izidakamizwa ze-antihypertensive zivame ukufakwa kumbhalo wokulashwa kwe-carotid arteriossteosis.
Iziguli ziyelulekwa ukuba zihambe emoyeni omusha nsuku zonke okungenani amahora angama-1-2. Ama-cocktails awusizo we-oxygen. Ukwelashwa ngemishanguzo yabantu kungenzeka, kepha akukubi ekwelashweni kwezidakamizwa. Ezimweni ezinzima, ukuhlinzwa kwe-endarterectomy noma i-endoscopic kuyadingeka.
Imvamisa stenting kanye ne-prosthetics kwenziwa. Nge-occlusion ephelele, kudalwa i-anastomosis. Ngakho-ke, ukulimala kwemithambo ye-carotid kuyindlela ebucayi engaholela ku-ischemia e-cerebral ischemia.
ICarotid Cholesterol Plaque
Ukunciphisa kancane kwemithambo ye-carotid, ngenxa yezilonda ze-atherosulinotic, kungaholela emiphumeleni engenakuphikiswa emangqamuzaneni obuchopho, futhi kuthuthukise i-pathologies eyinkimbinkimbi yemithambo yemithambo yegazi, evame ukuholela ekufeni.
Uma amaseli obuchopho engatholi i-oksijini, khona-ke lezi zimpawu ze-hypoxia yobuchopho ziyavela:
Isiyezi nekhanda lokuqina okuhlukahlukene,
Akuwona umbono ocacile, izimpukane emehlweni, i-nebula,
Ukukhathala komzimba okuhlala njalo nokukhathala okusheshayo,
Ukulala okuphazamisa ukuqwasha
Ubumnyama emehlweni kanye nesimo sokufeyila, ukulahlekelwa ukwazi,
Ukudalulwa esikhaleni nangesikhathi,
Imemori engasebenzi kahle, ubuhlakani, nokuhlushwa,
Ukuhlukumezeka kwengqondo nangokomzwelo, ukuhlukunyezwa okuthe xaxa kanye nokuziphatha. Umuntu uyeka ukulawula izenzo zakhe.
Ukuncipha okuncane kwemithambo ye-carotid
Imvamisa, i-atherosclerosis emikhunjini yentamo, isiza sokufiphaza se-carotid artery enkulu kanye ne-carotid artery (ICA) yangaphakathi ihlupheka. Amathafula we-atherossteotic afakwa kumthamo we-choroid.
Ngokuvamile, i-atherosclerosis emithanjeni yangaphakathi ye-carotid iholela ekushintsheni ezindongeni futhi kungaholele ngisho nase-occlusion.
Ingozi yezindawo ezinamathele ezinjenge-atherosclerotic plaque ileli lokuthi amapuleti anamathela engxenyeni eyonakalisiwe ye-endothelial bese eqala ukwakha i-beg yegazi, engangena emithanjeni yemithambo yegazi ngokugeleza kwegazi futhi iphazamise ischemia kanye ne-cerebral infarction.
Imivimbo ye-Ischemic, noma i-infraal infarctions, iyabulala ku-5.0% yeziguli ezine-atherosclerosis emithanjeni ye-carotid.
Ngenxa yengozi yalolu hlobo lwe-sclerosis emgodini wegazi, abantu asebefinyelele eminyakeni engama-35 badinga ukunikela ngegazi nge-cholesterol ngokuhlelekile, njalo ezinyangeni eziyisithupha, futhi bahlolwa izivivinyo ukuthola ukuthikamezeka emithanjeni yegazi nasemithanjeni yegazi ukuze kutholakale i-atherosclerosis yemithambo ye-carotid esigabeni sokuqala sentuthuko.
Izimbangela ze-carotid sclerosis
I-Atherossteosis yisifo esingama-systemic esingamahlalakhona, ukuthuthukiswa kwayo okuqala kudala ngaphambi kwezimpawu zayo zokuqala. Kungahamba iminyaka engaphezu kwe-10 ukusuka ekuqaleni ukwakhiwa kwendawo ye-cholesterol ku-endothelium kuze kube yizimpawu zokuqala zokubonakaliswa kwe-stenosis ye-choroid.
I-Atherossteosis yakhiwa ngokuhambisana ne-pathologies of calcification, ebamba iqhaza ekwakhekeni kwamapheringi e-atherosulinotic emthanjeni wemithambo ye-carotid artery.
Amadiphozithi e-cholesterol emthanjeni ophambili we-carotid akhiwa ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Ukuphambuka ekusebenzeni kwe-lipid metabolism. Emgodini wegazi kunenani elikhulu lama-molecule we-cholesterol yamahhala, kanye nenqwaba yama-lipoprotein asezingeni eliphakeme egazini, okuholela ekufakweni kwesisindo esiphansi samangqamuzana ne-cholesterol yamahhala ngaphakathi kwe-choroid ngesimo sendawo ye-lipid.
Ukwehluleka ohlelweni lwe-hormonal, olukhuthaza ukwanda okwenziwe ngamamolekyuli we-lipoprotein ngamaseli wesibindi,
Hypercholesterolemia yofuzo lomndeni,
Ngokwalo mbono wochwepheshe, imbangela ye-autoimmune, ukusabela kwama-macrophage ahlukahlukene, kufaka phakathi i-leukocytes kuya ku-intima yemithambo, kungavusa i-atherosclerosis pathology.
Ngaphezu kwezimbangela eziningi ze-atherosulinosis ezichongiweyo, imbangela evame kakhulu kwezokwelapha ukwephulwa komzimba we-lipid emzimbeni.
Ngalesi sizathu, ukugcwala kwe-cholesterol egazini kukhuphuka, okuholela ekwakhekeni kwe-atherosulinotic neoplasms ku-choroid.
Izinhlobo zeCarotid Atherossteosis
Ngokuya ngokuboniswa kwemitholampilo, kunqunywa okuhlukahlukene kwe-pathology. Ngokusho kwe-ICD-10, izinhlobo ezi-3 zokukhula kwe-sclerosis emithanjeni ye-carotid ziyahlukaniswa:
Uhlobo olunyantisayo lwe-carotid atherossteosis i-arterial lumen incishiswa ngaphezulu kuka-50.0%. Ukwelashwa kufanele futhi kuhambisane nokudla okuqinile kwe-cholesterol, kepha ngalolu hlobo lwe-atherosclerosis, imithambo ye-carotid ichithiwe, okumele ilungiswe ngonyango lokuhlinzwa, noma isikhathi eside sokwelashwa ngemithi kufanele sisetshenziswe,
Uhlobo olungeyona i-stenotic ye-carotid atherossteosis i-arterial lumen incishiswa ngaphansi kwama-50.0%. Ukwelashwa okuyinhloko kwalolu hlobo lwe-atherosulinosis kuhloswe ngalo ukusebenzisa ukulungiswa kokudla okunempilo nokwandisa umsebenzi womzimba emzimbeni, kanye nokusetshenziswa kwemithi okuhloswe ngayo ukwehlisa ukuqina kwe-cholesterol egazini. Izindlela zokwelapha zokwelapha zivame ukusetshenziswa,
Uhlobo olunhlobonhlobo lwe-atherosclerosis emithanjeni ye-carotid. Le ndlela yokwakhiwa kwe-pathology iphathwa ngokuya ngokuphazamiseka kwe-hemodynamic emithanjeni yemithambo yegazi, kanye nesimo sokusebenza kwezingxenye zobuchopho. Kuphela ngokwesisekelo sokuxilongwa okugcwele, kungenzeka ukubona imininingwane emithanjeni ye-carotid futhi udokotela uzonquma ukuthi ubaphatha kanjani.
Kaningi, izindlela zokwelapha ezisetshenziselwa ukwelapha i-sclerosis emithanjeni ye-carotid.
Ngosizo lokuhlinzwa, ungakhipha ngokushesha i-atherosclerotic plaque esuka kumthambo bese usungula ukuphuma kwegazi kuye ebuchosheni.
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-atherosulinosis zemithambo ye-carotid
Izimpawu ze-atherosclerosis zemithambo ye-carotid main
Izimpawu ze-carotid artery sclerosis esiteji sokuqala aziveli nganoma iyiphi indlela, kuya ngokuthi isilinganiselo salezi zindlela ezinkulu sikhulu ngokwanele, ngakho-ke inqubo ye-arterial sclerosis ithatha isikhathi esingaphezu konyaka.
Izimpawu zokuqala zokuba khona kwe-atherosclerosis emithanjeni yentamo ziqala ukuvela kulezi zimpawu:
Isiguli siqala ukuzwa ukuzwela entanyeni engxenyeni ethintekile yomthambo. Ekuqaleni, ukuzindla kwenzeka okwesikhashana, kodwa lapho isifo siqhubeka, khona-ke ukuzwakala kwendlebe kuzwakala endaweni enkulu futhi kuthatha isikhathi eside,
Imisebenzi yobuchopho ibuthaka ngokukhula kwe-atherosulinotic plaque kanye nokunciphisa i-lumen ye-arterial.
Amandla okusebenza ayancipha futhi isiguli sizizwa sibuthakathaka emzimbeni wonke. Ngokuvalwa okukhulu kwe-lumen ye-arterial yi-plaque, amaseli obuchopho aqala ukuhlushwa yi-hypoxia. Umzimba uqala ukwehlisa izinsizakusebenza zawo, futhi kukhona ukwehla komsebenzi ezingeni lokuqonda nangokomzimba,
Ukulahleka kombono wesikhashana. Lesi sibonakaliso sizibonakalisa esigabeni esisekupheleni sokukhula kwe-pathology futhi siyi-harbinger of ischemic stroke.
Izimpawu ezinjalo zingavela nangamanye ama-vascular pathologies nezinkinga ezisebuchosheni, kepha lokhu kuwuphawu lokuthi kuyadingeka ukuthi kutholakale ukuxilongwa ukuze kutholakale ukuxilongwa kwe-atherosclerosis ye-carotid artery.
Isiguli sizizwa sibuthakathaka emzimbeni wonke
Yimuphi udokotela okufanele ngixhumane naye?
Uma kwenzeka kuvela izimpawu zokuqala zokuphazamiseka kwegazi kwe-atherosclerotic OSA, udinga ukuya esikhathini nodokotela nodokotela oyisilonda. Ngemuva kokuhlolwa kanye nokuxilongwa okutholwe ngokusobala, udokotela uqondisa isiguli kudokotela wephrofayili. Isazi se-angiologist siphatha imithambo yegazi, udokotela we-phlebologist uphatha imithambo.
Uma uhlobo lwe-multifocal lwe-atherosulinosis lukhula futhi imithambo ye-coronary kanye nesitho senhliziyo kuyathinteka, khona-ke kufanele uye esiteshini sokubonana nodokotela wenhliziyo. Ngesigaba esithuthukile se-atherosulinosis se-carotid artery kanye nomonakalo ebuchosheni, udokotela wezinzwa ubamba iqhaza ekwelashweni.
Futhi, ekwelashweni kokuhlinzwa kwale pathology, udokotela ohlinzayo wamathambo, noma i-neurosurgeon, uyathinteka.
Ekwelashweni kokuhlinzwa kwale pathology, udokotela ohlinzayo wemithambo uyathinteka
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis yemikhumbi ye-carotid
Ukwelashwa kokufakwa kwemali kwe-sclerotic ku-OSA kumele kwenziwe ngokuphelele futhi inqubo yokwelapha ngokwayo kufanele iqale kusenesikhathi.
Izindlela zokupheka zemithi yendabuko zokwelapha i-atherosclerosis of the carotid artery are not used, ngoba ukungasebenzi kwabo sekufakazelwe, kepha isikhathi salokhu kwelashwa siyaphela, futhi ngalesi sikhathi i-atherossteosis ingangena ngendlela eyinkimbinkimbi, engaholela ekufeni.
Okokuqala, ukwenza indlela yokuphila kanye nokulungiswa kokudla okunempilo.
Ukwelashwa kokudla kwenqabela ukusetshenziswa kwalokho kudla:
Izitsha ezilungiselelwe ngokugaya nokubhema,
Imikhiqizo efaka amafutha ezilwane, ukudla okunamafutha obisi, isaladi, inyama, amaqanda,
I-Carbonated neziphuzo ezimnandi,
Ikhofi eqinile yemvelo kanye netiye,
Isinkwa namakhekhe kusuka kumabanga aphezulu kafulawa omhlophe,
Imenyu kufanele iqukethe ngamanani amakhulu:
Imifino emisha, kanye namajikijolo, izithelo nemifino,
Izinhlanzi zasolwandle okungenani izikhathi ezi-4 ngesonto,
Inyama yezinhlobo ezimhlophe ezinamafutha amancane,
Amantongomane, Oils Vegetable,
Izinhlamvu ezisuselwa okusanhlamvu, kanye nobhontshisi nobhontshisi,
Imikhiqizo yobisi yesikhumba.
Lapho udla, udinga ukudla izikhathi eziyisithupha ngosuku, futhi ukunikezwa kufanele kungabi ngaphezu kwamamililitha angama-200, futhi akufanele ukhohlwe ngokusetshenziswa kwamanzi okuhlanzwa nsuku zonke afinyelela kumamilimitha ayi-1,500.0.
Imenyu kufanele ibe nenqwaba yemifino entsha, kanye namajikijolo, izithelo nemifino
Ekwelapheni i-atherosclerosis emithanjeni ye-carotid, kusetshenziselwa umuthi ukunciphisa ukugcwala kwe-cholesterol egazini, kanye nezidakamizwa ukuze kudambise izimpawu zesifo sokuqaqamba kwamalunga:
Izidakamizwa ukwehlisa inkomba yomfutho wegazi,
Izidakamizwa ze-Statin ne-fibrate ukwehlisa inkomba yakho ye-cholesterol embi,
Imithi elandelana nemithi yama-asidi acid ukwenza kusebenze i-bile, ebandakanyeka ekusebenziseni i-lipid okweqile,
Imithi yokubuyisa umzimba emzimbeni,
Ama-antiplatelet agents avimbela ukwakheka kwezigaba zegazi kanye ne-thrombosis yemithambo yegazi. Ukwemukelwa kwama-anticoagulants atherosulinosis kuthathwa impilo yonke.
Yonke imishanguzo enqunywe ngudokotela oholayo futhi azenzele umuthi walezi zifo awuvunyelwe, ngoba kuzoholela ezinkingeni nasekufeni.
Izidakamizwa ezisetshenziselwa ukwelapha isifo samathambo emithanjeni ye-carotid
Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-atherosulinosis CA
Uma ukwelashwa kwezidakamizwa kungazange kusize ekunciphiseni izimpawu zokubonakaliswa kwe-atherosulinotic, khona-ke kuhlolwe ukuhlolwa okusetshenziselwa ukwelashwa ngokuhlinzwa. Ukusebenza kohlobo oluvulekile kwenziwa emithanjeni ye-carotid futhi kusetshenziswe inqubo engahlaseli kakhulu, esetshenziselwa ukuhlupheka kakhulu.
Indlela yokungenelela kokuhlinzwa ihlolwe ngudokotela ngokuya ngemiphumela yokuxilongwa kwe -operative.
Izindlela zokusebenzisa imithambo ye-carotid:
Ukuhlinzwa kwe-Carotid endarterectomy evulekile ukususa i-atherosclerotic plaque,
Uhlobo lwe-balloon angioplasty lwenziwa endaweni engafinyeleleki lapho kungenakwenzeka khona ukufeza i-endarterectomy,
Indlela ehlaselayo yokuhlaselwa. Ngokugobhoza emzimbeni, i-stent ifakwa emthanjeni we-carotid, okhulisa i-lumen ye-arterial.
Izindlela zokuvimbela ziqukethe ukusetshenziswa kwale mithetho yokuhlala:
Ukuyeka ukubhema nokuphuza utshwala
Qinisa umsebenzi wokuzivocavoca emzimbeni bese ukhulisa umsebenzi,
Yilwa lawo makhilogremu angeziwe
Gwema ukucindezela kovalo kanye nezimo ezicindezelayo,
Njalo qapha futhi uguqule ama-glucose kanye nama-index wegazi.
I-Atherossteosis ibhekisela kulawo ma-pathologies okulula ukuwavikela kunokulapheka kamuva.
Ngendlela yezokwelapha, le patology ayelapheki ngokuphelele, futhi ukwelashwa okuhlinzwa kungabuyisela ukugeleza kwegazi, kepha kuhlale kunobungozi bokuthi kwakhiwe i-plaque kwenye indawo emikhunjini eyinhloko.
Ividiyo: Carotid stenosis. Yini evimbela ukuhamba kwegazi?
Ngisho nochwepheshe okhethekile akathembisi ukwenza i-phennosis yalesi sifo futhi ngeke asho ngokuqiniseka ukuthi i-atherosulinosis emithanjeni enkulu ye-carotid izovela kanjani. I-Sclerosis icashile impela futhi ingaba ne-asymptomatic futhi ibonakale ngokushesha njengesifo sohlangothi, okuholela ogulayo ekufeni.
Futhi i-sclerosis yohlobo olungeyona i-stenotic, eqhubeka isikhathi eside futhi ilethe izimpawu eziningi ezibucayi esigulini, ngokwelashwa okuyikho nangendlela efanele yokuphila, yandisa impilo yesiguli amashumi eminyaka.
Ngabe ifomu lesigcawu lisebenza kanjani emthanjeni we-carotid?
Esifundeni somlomo wesibeletho somuntu ngamunye, imithambo ye-carotid eyi-2 idlula ngokushesha, kanye nama-vertebrates ama-2 ohlangothini lwesobunxele nakwesokudla. Ngale misipha yomgogodla wesibeletho, igazi ligobhoza ebusweni nasebuchosheni. Uma kuqhathaniswa nokugeleza kwegazi emgogodleni, emgogodleni wesibeletho konke kwenzeka kakhulu ngokwedlulele, futhi noma ikuphi ukuphambuka kusuka kokujwayelekile kunciphisa ukuhamba kwegazi futhi kuthinta ikhwalithi yempilo yomuntu. Kungakho ukubaluleka kwemithambo ye-carotid kuphezulu kakhulu.
Vele, inqubo ayenzeki ngosuku olulodwa futhi kwesinye isikhathi ngisho nangonyaka owodwa, kepha ukulandelana okuthile kwezinguquko ezenzeka emzimbeni womuntu kufana nokuqalwa kwesifo. Okokuqala, ukuze lezo zinguquko zenzeke, umuntu kufanele abe nezimfuneko ezithile kanye nezimo ezinhle. Lokhu kungaba ukuqhuma okuncane kakhulu emithanjeni ye-carotid, lapho i-cholesterol izotholakala khona. Ukugeleza kwegazi okucolile endaweni ethile kungenye ithuba lokuthi i-plaque yakheke kule ndawo ngokuzayo. Ekugcineni, odokotela baphawula ukuthi kaningi le nkinga kwenzeka endaweni yemfoloko yomthambo we-carotid artery, lapho izindonga zemikhumbi zincinjana.
Ngakho-ke, izimfuneko eziqondile zokubukeka kokukhula kwe-cholesterol ezindongeni ze-carotid artery ukusetshenziswa ngokweqile kokudla okunamafutha, i-lipoprotein-rich rich-density vyakula.
Kumuntu ophile kahle, ukwanda kokudla kwe-caloric akunakwenzeka ukuthi kuholele ezinkingeni ohlelweni lwezinhliziyo, kepha-ke, uma ukudla ngokweqile kwenzeka njalo, izindlela zokuvikela umzimba ziqala ukwehluleka. Uma ama-enzyme e-parietal evame ukusiza ukwehlisa amafutha, khona-ke ngokweqile kokudla okunama-khalori amaningi, ngeke akwazi ukubhekana nenani lomsebenzi okufanele bawenze. Futhi-ke, izinhlanganisela eziyinkimbinkimbi ze-lipids, amaprotheni ne-cholesterol akhiwa emgodini wemithambo yegazi nemithambo yegazi. Lezi zinhlama ezincane zingahle zihambele ohlelweni lwe-vascular bese zinamathela endaweni engenamandla, lapho indawo ye-parietal isikhululekile futhi ivuvukala.Kungenzeka ukuthi lokhu okunamathiselwe kuzokwenzeka ngokunembile ku-carotid artery.
Ngemuva kokuthi ibhola elinamafutha lijoyine udonga, kukhona ukwanda kwezicubu ezithintekayo ezintsha. Ochwepheshe babiza lesi sigaba lipossteosis. Ngemuva kwesikhashana, ukukhula sekuvele kwakhiwe ngokuphelele futhi kwafakwa odongeni. Ngaphezu kwalokho, i-atherossteotic plaque isazoqhubeka nokukhula.
Ochwepheshe bahlukanisa i-sclerotic plaque ibe izingxenye ezimbili - umgogodla nethayi (ungqimba lwangaphandle). Umongo uqukethe i-cholesterol yamahhala ene-ether encane, esiza ekuqiniseni. Eduze kwe-nucleus, umuntu angabona ukwakheka kwamangqamuzana "amachaphaza". Lawa ngama-macrophage, athi ingxenye enkulu enziwe ngamafutha. Ngokuhamba kwesikhathi, izakhi ezinamafutha zithinta ama-macrophage futhi zingene kuyi-nucleus.
Ungqimba lwangaphandle lwe-atherosclerotic plaque luyisikhumba esise-fibrous esine-elastin ne-collagen fibers. Amaphesenti e-collagen ne-elastin athinta ngqo ikhono lothayi ekuqhekekeni.
Emazingeni okuqala, izingwegwe ezise-carotid artery azinamandla kangako. Okuqukethwe kwabo kungabizwa ngokuthi yi-semi-ketshezi, futhi ngenxa yalokho kungaba namandla okuchithwa. Vele, uma umuntu ebazi ngobukhona babo ngalesi sikhathi, khona-ke ukwelashwa bekuzoba lula kakhulu. By the way, ngisho nakulesi sigaba, i-plaque atherosclerotic isivele iba yingozi enkulu. Ngokuhlukaniswa kwezinto ngazinye zokukhula, ukuvalwa okuphelele komkhumbi kungenzeka. Ukuqhekeka okunjalo kokhakhayini we-carotid artery kwenzeka uma ingxenye ethintekile ime kwenye, isigaba esincanyana, ngokwesibonelo, endaweni yemfoloko.
Ngokuhamba kwesikhathi, igobolondo elingaphandle liba mnyama. Iqongelela usawoti we-calcium, okungezelela ukukunika ubunzima. Ngakho-ke kuqala isigaba sokugcina sokubumba i-atherosselotic plaque - atherocalcinosis. Manje lo mkhakha we-cholesterol ukhula kancane, uzinzile futhi unganyakazi ngokuphelele. Ngalesi sikhathi, kunokuwohloka kokugeleza kwegazi kule ndawo. Ngendlela, ngisho ne-plaque ezinzile ingakhula ngokuqhubekayo, kepha lokhu kuzokwenzeka iminyaka eminingana. I-collagen eyiqukethe isiza izindonga ze-plaque ukuthi zihlale ziqine futhi zivimbele ukuqhuma kwayo.
Uma ukwakheka kwengcwethi kunamaphesenti aphakeme kakhulu we-lipids, khona-ke ukwakheka okunjalo kubhekwa njengokungazinzi. Lokhu kusho ukuthi kusenokwenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi kuqhume, okungaholela ku-thrombosis.
Kukhona into efana ne-heterogeneous atherosulinotic plaque. Kulokhu, inkambo yalesi sifo iyinkimbinkimbi ngokugcwala kanye nezilonda ezivame ukwenzeka ngaphezu kwepulazi le-cholesterol. Izinsimbi zesimo esinjalo azilingani; kukhona ukucindezela okusobala ebusweni.
Izigaba zokwakhiwa kwe-plaque ku-carotid artery.
Ukuqongelela ezitsheni zamafutha ezinamafutha okungasebenzi ukuthi kuchithwe.
Amaseli wokuvuvukala abandakanyeka kwinqubo - ama-T-lymphocyte nama-monocytes.
AmaMonocytes athuthela odongeni lwamadolo, ngaleyo ndlela enza ukonakala kwefomu leseli le-endothelium ne-foam.
Amapulatifomu aqhamuka egazini akhangwa endaweni elimele.
Njengomphumela womonakalo we-endothelium, umzimba ubeka abameli bokuvikela amaseli, futhi futhi uzama ngenkuthalo ukwakha indawo elimele.
Ukukhiqizwa okwandayo kwe-collagen ne-elastin kuholela ekuqongeleleni kwabo kwasendaweni kanye nokubonakala kweshubhu ku-lumen yamahhala yomkhumbi.
Ukukhula kuhlangene futhi kukhuphuke ngosayizi.
Zingahle zingaveli isikhathi eside kakhulu, futhi lokhu kuyingozi enkulu. Izimpawu ezibonakalayo zingahluka futhi zincike ezintweni eziningi - usayizi wediphozithi, okwasendaweni, njalonjalo. Kaningi, ngokwehla kokugeleza kwegazi endaweni ethile, kubonakaliswa ukubonakala kokukhathala ngemuva kokuzivocavoca ngokomzimba noma nganoma yikuphi ukushesha kokujikeleza kwegazi. Iziguli eziningi zibika ukuba buhlungu komoya omncane, kepha ungazinaki. Futhi-ke, uphawu lokuwohloka kwe-cholesterol engazinzile ukuhlaselwa yinhliziyo noma unhlangothi.
Imvamisa, izimpawu zenzeka ngokuhambisana nalezo zibonakaliso ezibonakala ezigulini ezikhuluphele. Ngakho-ke, ukuhlaselwa kwe-ischemic kungenzeka, lapho okulandelayo kungabhekwa:
Ukudideka kwenkulumo. Ukwephulwa kokuhlinzekwa kwegazi ebuchosheni kuholela ekushintsheni okuningi, izimpawu zazo ezingafaka phakathi ukudideka kwenkulumo. Indlala enjalo yomoya-mpilo ivimbela umuntu ukuthi enze umusho olula.
Amandla Kuvela kungazelelwe futhi kutholakala endaweni eyodwa kuphela yomzimba.
Ukulimazeka kokubonakalayo esweni elilodwa. Isibonakaliso esinamandla kakhulu, sikhuluma ngesimo sangaphambi kokushaywa unhlangothi komzimba.
Ubuthakathaka. Mhlawumbe okubaluleke kakhulu, ngokusho kweziguli, uphawu. Iqiniso ngukuthi i-atherosclerotic plaque ivala ukugeleza kwegazi, okuholela ekushoneni komoya-mpilo. Futhi, umzimba uvula imodi "yokonga amandla". Isiguli sizizwa sikhathele njalo, singalapheki futhi sizwa nokuqhekeka ngaphandle kokusebenza ngokomzimba.
Kumuntu ngamunye, izimpawu zingaphawuleka noma zibe buthaka. Ezinye iziguli zinesibonakaliso esisodwa kuphela ohlwini, kanti ezinye zichaza isithombe esiphelele somtholampilo. Ekuqaleni, ukuhlaselwa kwe-ischemic kungaba mfushane kakhulu, kuze kufike ehoreni, futhi kamuva kungahlala cishe usuku. Ngokuhamba kwesikhathi, izikhathi eziphakathi kokuquleka zingancishiswa, futhi manje umuntu uba yisiguli se-cardiologist esidinga ukwelashwa ngokushesha.
Ukuhlinzwa kuzosusa ngokuphelele i-cholesterol plaque futhi kubuyisele ukuphuma kwegazi. Isinqumo sokuthi iyiphi indlela lokhu okufanele yenziwe ngayo kufanele senziwe udokotela kuphela. Namuhla, izinhlobo ezimbili zokungenelela kokuhlinzwa zivame ukusetshenziselwa ukwelapha le nkinga - i-balloon angioplasty elandelwa yi-stenting ne-endarterectomy.
Indlela yokuqala yenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. Ukuze wenze lokhu, udokotela wethula ibhaluni le-balloon ngokusebenzisa i-catheter emthanjeni we-femal artery noma i-radial artery engalweni. Lapho ibhaluni lifinyelela indawo efiselekayo kumthambo we-carotid artery, limane landisa isibani. Ngaphezu kwalokho, i-stent ifakwa kwisiza esinciphile. Lesi yisikhala esincane sensimbi, esigxiliwe endaweni yokunciphiswa komthambo we-carotid futhi ngaleyo ndlela ikuvumela ukuthi ubuyisele ukugeleza kwegazi.
I-Endarterectomy yenziwa kuphela ngaphansi kwe-anesthesia ejwayelekile noma yasendaweni. Kulokhu, udokotela wethula insimbi eguquguqukayo, efinyelela endaweni yokuncipha. Manje udokotela ohlinzayo ususa ngobumnene i-plaque uqobo, oluvimba ukuhamba kwegazi. Ngeshwa, amacala amaningana okuphindeka kwalesi sifo achaziwe, ngoba ukwakheka kodonga lomkhumbi kule ndawo akuselungele, okusho ukuthi lesi sifo singabuya.
Ukwelashwa kwe-laser nakho kungasetshenziswa. Kulokhu, udokotela uqondisa ugongolo lwe-laser ngqo endaweni yokwakheka kwe-plaque. Ngaphansi kwethonya lolu bhaqa, isimo sivele sivele.
Ukwelashwa kwe-Ozone kungabizwa ngokuthi ukuhlinza ngokuluka okuncane. Kulokhu, udokotela wethula i-ozone esegazini lesiguli, elinempahla yomenzeli oxidizing ne-immunomodulator. Ihlanza izigaxa ezinkulu ze-lipid egazini, isheshise i-metabolism, okuyiyo ezigulini eziningi ezinama-plaque emthanjeni we-carotid imane nje idingeka.
Ekugcineni, i-thrombolysis nayo ingabangelwa izindlela zokuhlinzwa. Umongo wayo ukuthi udokotela wethula into ekhethekile enomphumela wokuxazulula i-carotid artery. I-cholesterol plaque ichithiwe ngokuphelele, futhi ukuphuma kwegazi kuyabuyiselwa.
Owokuqala usayizi we-plaque. Njengomthetho, kunqunywa uma i-plaque esethombeni ethintekayo ye-carotid artery ivimba ngaphezu kwe-70% ye-lumen ephelele. Idiphozithi enjalo yenziwa iminyaka eminingana, futhi isiguli sonke lesi sikhathi sazizwa siwohloka. Izinkomba ezinobuhlakani zifaka ukunganakwa kwesiguli ekwelashweni kwezidakamizwa. Ngamanye amagama, uma ukuthatha imishanguzo kungazange kunikeze umphumela, imvamisa kakhulu udokotela unquma ukwelapha isiguli ngezindlela zokuhlinzwa, ezingaba yinsindiso yangempela isiguli. Futhi, isimo esingazinzile se-plaque, ulwelwesi lwayo olungalingani, okuthi noma ngasiphi isikhathi luqhamuke futhi lubange ukulimala okungalungiseki, lungabhekwa njengophawu lokwelashwa okuhlinzwa. Uma isiguli sivele sinezimpawu ze-microinfarction noma unhlangothi, khona-ke ukuhlinzwa futhi akumele kubambezeleke.
Contraindication ekwelashweni kokuhlinzwa
Ngeshwa, iningi leziguli ezinale nkinga linomfutho wegazi ophakeme, futhi lokhu kwenza izinguquko zalo ekungeneleleni kokuhlinzwa. Ekuqaleni, udokotela wezinhliziyo uzama ukulinganisa ingcindezi. Ukwehluleka ukuletha umfutho wegazi lesiguli esimweni esizinzile kungukuphikisana ekuqaleni kokuhlinzwa. Ubunzima buye futhi kungukwephula isigqi senhliziyo.
Futhi, ukuhlinzwa akumele kwenziwe ngesikhathi sokuqubuka kwezinqubo ezenzeka emzimbeni. Kulokhu, umzimba ungaphendula ngokulingene ekuphathweni kwezidakamizwa ezilawulwa yi-anesthetist. Ukuba khona kokungaphenduki komzimba kwezidakamizwa ezihlinzekwa ngesikhathi sokuhlinzwa kuyisici esiphelele sokukhanselwa kwenqubo.
I-balloon angioplasty elandelwa ukufakwa ngamazinyo imvamisa yenziwa uma i-endarterectomy ingenzeki ngenxa yesizathu esithile. Futhi, i-angioplasty ayenziwa phambi kwanoma yisiphi isifo se-vascular esiphazamisa ukusetshenziswa kwezinsimbi ze-endovascular. Ekugcineni, ingqikithi ye-vascular occlusion nayo kungukuphikisana okuqondile ne-sti ye-angioplasty. Ukudonswa kwemithambo kanye nokuqunjelwa kwemikhumbi kuyinkimbinkimbi yokwelashwa okuhlinzwa, futhi kulokhu, ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa kangcono uchwepheshe onolwazi.
Uma isiguli sine-hemorrhage e-cerebral ezinyangeni ezimbili ezedlule, khona-ke ukuhlinzwa kufanele futhi kuhlehliswe. Ayenzelwe iziguli ezinesifo i-Alzheimer's.
I-Thrombolysis nayo ingaba yingozi. Iqiniso ngukuthi uma imaniphu kadokotela ohlinzayo ongenalwazi ayilungile, ingaholela ekushayweni kwenhliziyo noma ekuqhekekeni kwama-capillaries.
Impilo yesiguli ngemuva kokuhlinzwa
Ukuhambisana nemithetho esikhathini se-postoperative kungathuthukisa kakhulu imiphumela udokotela ohlinzayo enze ngayo okuningi. Okuphoqelelwe okunciphise igazi. Ngendlela, i-aspirin elula kakhulu ibhekana nalokhu okuhle kakhulu, futhi yiyo evame ukuvela kwiresiphi, noma ipheshana elibhalwe phansi. Ama-Statins nawo anqunyelwe, okusiza ukunciphisa ijubane ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis.
Bangakwazi ukuhambisana kahle nokwelashwa okuyinkimbinkimbi. IHirudotherapy inomphumela omuhle kakhulu. Ngendlela, ukwelashwa kwe-leech manje kwenzelwa ezikhungweni eziningi ze-cardiology. Amathe avuvukala afaka amanzi emzimbeni. Le ndlela ikuvumela ukuba ususe ngokushesha izimpawu zempilo engeyinhle, okwakungumphumela wokwakhiwa kwe-plaque emthanjeni we-carotid. Umphumela uhlala isikhathi eside kakhulu.
Eminye imikhiqizo isiza ukuguqula ukwakheka kwegazi futhi inciphise ama-cholesterol plaque emgodleni wesibeletho. Ngakho-ke, ujusi we-beet, ongezwe ngamanani amancane kunoma yisiphi isiphuzo, ukhuthaza ukuqothulwa kwezakhi ze-lipid futhi uzivimbele ekwakheni amajamo azimele oyindilinga emikhunjini.
I-ether equkethwe ku-anyanisi negalikhi inomphumela ofanayo wokwelapha odongeni lwe-vascular. Ngendlela, imikhiqizo emisha kuphela ngaphandle kokwelashwa okushisa okuncane okunomphumela onjalo.
Ijwayelekile ukwakheka kwamakhemikhali kwegazi noju. Uma kungekho okubangelwa yi-allergies kuyo, umuntu kufanele athathe izipuni ezimbili zoju ngosuku. Ushukela omsulwa kunconywa ukuba ungafakwa ekudleni.
Indima yemithambo yegazi entanyeni kanye nengozi yokwehlulwa kwabo
Ama-carotid artery angenye yemikhumbi ebaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Zondla zonke izitho zekhanda, kufaka phakathi ezibaluleke kakhulu - ubuchopho. Futhi, njengoba wazi, udla u-1/5 wawo wonke umoya-mpilo ongena egazini. Ngakho-ke, ngokuncipha kokukhanya kwale mithambo yegazi, isitho esibaluleke kakhulu somzimba siyahlupheka.
Udonga olujwayelekile lwemikhumbi lubushelelezi, ngokungabikho ngokuphelele kwezinto eziphuma kulo. Uma ama-cholesterol plaque efakwa ezindongeni, kuvela isifo okuthiwa yi-atherosclerosis. Ukwakheka kwamaphothali kufaka phakathi i-calcium, i-lipid amana. Zonke ziphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile.
Ukuvezwa kwe-plaque ezindongeni zemithambo ye-carotid artery kwenzeka lapho eminye imithambo yegazi isivele ithinteka yi-atherossteosis. Ukwanda kwenani nosayizi wama-deposithi anjalo kuholela ekuphazamisweni kokudla kwengqondo, okubuye kudale ukuthuthukiswa kwezinkinga eziningi eziyingozi. Okubi kakhulu kunayo yonke i-ischemic noma i-hemorrhagic stroke, imvamisa eholela ekufeni.
Esikhathini sokuqala, isiguli sihlakulela i-non-stenoticosis, okwamanje ayiholeli ekunciphiseni i-lumen yomkhumbi. Kepha ezigabeni zakamuva zalesi sifo, kuvela i-stenotic atherosclerosis, esidala ukuqhekeka komthambo wegazi, obaluleke kakhulu empilweni.
Kungani lesi sifo sikhula?
Imithambo ye-carotid kufanele isebenze kahle ngokushelela. Lokhu kubalulekile ngoba baphatha umoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba eziya ebuchosheni. Kodwa-ke, ngokuqhubeka kwesikhathi, zingancipha futhi zibe lukhuni. Lokhu kwenzeka ngenxa yokuqongelela kwama-atherosselotic plaque ezindongeni zawo.
Izizathu eziphambili zokwakhiwa kwe-carotid atherosclerosis yilezi:
Imikhuba emibi, okungukuthi ukubhema ugwayi nokuphuza utshwala.
Umfutho wegazi ophezulu we-Arterial.
Ukuphazamiseka kwezitho zokucasha kwangaphakathi.
Ama-pathologies ahlukahlukene we-metabolism yamafutha (endaweni yokuqala ukukhuluphala).
Amaphutha ekudleni, ukwephulwa kokudla okunqunywe udokotela.
Isimo sofuzo esibi.
Ukucindezelwa njalo kwemizwa.
Ukungasebenzi, okungukuthi, ukuntuleka komzimba.
Eminye imigudu yokudlulisela amagciwane ngaphambili.
Ukuphazamiseka kwesistimu yokuzivikela komzimba (kanye namanye ama-autoimmune pathologies).
Isifo sikashukela mellitus. Isifo esinjengalesi sithinta kabi i-metabolism yamafutha, ngenxa yalokho umzimba usisebenzisa kahle amafutha.
Amanani aphakanyisiwe we-cholesterol "embi", i-triglycerides egazini nayo inomthelela ekuvezweni okunamandla kwamathafa e-atherosranceotic odongeni lwemithambo ye-carotid.
Imvamisa, izimbangela ezingenhla zithinta umzimba kinkimbinkimbi. Ngenxa yalokhu, amathuba okukhula kwe-atherosclerosis ayanda ngokwengeziwe.
Ezimweni ezingavamile, lesi sifo singakhula ngenxa ye-carotid artery aneurysm noma i-dysplasia.
Izimpawu zomuntu zesifo
Isilonda se-atherosclerotic semikhumbi yentamo siyingozi ngoba emabangeni okuqala asizivezi, asinikezi izethulo ezibekiwe. Futhi udokotela uvame ukuthola lesi sifo lapho ukulimala kwemithambo yangaphakathi ye-carotid sekufinyelele ezingeni elishiwoyo.
Kepha kusenezinamba zezimpawu ongasola ngazo isifo kuwe bese uthintana nodokotela ngesikhathi.
Ngakho-ke, ezigabeni zokuqala, ukuhlaselwa kwe-ischemic, okuthi, noma kunjalo, kudlule ngokushesha, kufanele kuqwashise. Izimpawu zokuhlaselwa okunje:
ukudunwa noma ukushuba kwengxenye yomzimba,
ukukhubazeka kwenkulumo (kuba kungabonakali),
ukungasebenzi kahle kwamehlo,
ukulahleka kokuzwela kwengalo eyodwa.
Lapho lesi sifo sikhula, lokhu kubonakaliswa kucacile, futhi ukuhlaselwa okwesikhashana kuhlala isikhathi eside. Lesi isibonakaliso esiqinisekile sokuthi udinga ukubona udokotela ngokushesha okukhulu.
Sidonsela ukunaka kwabafundi eqinisweni lokuthi izimpawu ezingenhla ziyisichizi sokuhlaselwa yisifo sohlangothi. Lokhu kuphinde kusikisele ukuthi usizo lodokotela luyadingeka ngokushesha!
Izinketho zokukhulisa lesi sifo
Njengoba sekuphawuliwe, inkinga eyingozi kakhulu ye-atherossteosis unhlangothi. Kunezindlela ezinjalo zokukhulisa lesi sifo ngokuvaleka kwemithambo ngama-atherosulinotic plaque:
Ukwehla okuqhubekayo kokugeleza kwegazi okuya ebuchosheni kuya ebuchosheni.
Ukuphindaphindeka kwamathafa we-atherosclerotic. Kodwa-ke, zingasakazeka ngegazi emithanjeni emincane. Ngakho-ke kunokuqhekeka kokuhlinzekwa kwegazi okujwayelekile engxenyeni ethile yobuchopho, ngenxa yalokho kufa.
Ukugeleza kwegazi okugeleza kwegazi ligazi (ingubo yegazi). Lokhu kungenxa yokuthi amapuleti anqwabelana egazini ngenxa yokuqhuma kwamapothinti. Baxhuma futhi bakha ingubo yegazi. Uma likhulu, lehlisa ukuhamba kwegazi, okubangela ukwethuka kwe-apoplexy.
Ukuhlolwa kahle kwesiguli kuyadingeka ekwenzeni ukuxilongwa. Kungemva kokuhlolwa okwanele kuphela lapho ukwelashwa okuqondile kwe-atherosulinosis kwemithambo ye-carotid kungabekwa khona. Ukuxilongwa kuqala ngomlando wezokwelapha. Udokotela kumele asungule izingozi ezibangelwa yilesi sifo.
Kubalulekile ukusungula auscultation (okulalelayo) wemithambo ye-carotid.
Qiniseka ukukala umfutho wegazi, ngoba izinkomba zokuphakama kwegazi zingakhombisa ukwephulwa emsebenzini wemithambo ye-carotid.
I-Ultrasound enokuskena kwe-Doppler yemithambo yegazi nayo kufanelekile. Le ndlela yokuhlola iphephile ngokuphelele futhi ayinazinhlungu futhi ikuvumela ukuthi usithole ngokunembile isifo.
Ngemiphumela engabazisayo yokuhlolwa, isiguli kufanele sinikezwe izinhlobo zokuhlonza ezinjengokuthi:
Icwecwe le-computer tomography (CT). Kwenza ukuthi kunqume ngokunembile ukwakheka kwemithambo yemithambo. Ukuthwebulwa kwe-CT kwenziwa ngempela kusetshenziswa i-Medium ephakathi.
I-Angiography yenziwa kusetshenziswa abenzeli abakhethekile abakhethekile. Ngenxa yengozi yokuhlukaniswa kwe-atherosulinotic plaque, lolu hlobo lokuxilonga aluvamile ukusetshenziswa manje.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuphela okungenza isimo semithambo silingane. Futhi udinga ukuqala ngokushesha okukhulu.
Ukwelashwa ngemithi yabantu, njengomthetho, akulethi imiphumela elindelekile. Kulokhu, isikhathi esibalulekile silahlekile, futhi esikhundleni sokukhululeka, kuvela ukwanda kwe-pathology.
Okokuqala, udinga ukulungisa amandla. Ukudla kuyakwenqabela ukusetshenziswa kokudla okufana nalokhu:
ikofi netiye elinamandla,
isinkwa se-premium grade,
Imenyu kufanele ibe nemifino emisha, izithelo, izitsha ezihlutshiwe.
Ukwelashwa kwezidakamizwa nakho kuyimpoqo:
Kusetshenziswa imithi ekhulula izimpawu ze-atherosulinosis.
Imvamisa, isiguli sinikezwa izidakamizwa ezinciphisa umfutho wegazi. Isidingo sokuqokwa kwabo kufanele sikalwe.
Kubalulekile kakhulu ukuthatha izidakamizwa ukwehlisa i-cholesterol yegazi. Basiza ukwehlisa ubukhulu bokubekwa kwama-atherosselotic plaque ezindongeni zemithambo yegazi.
Ngasikhathi sinye, izidakamizwa nazo zisetshenziselwa ukwenza i-metabolism ijwayelekile futhi iqinise imithambo yegazi.
Kwesinye isikhathi udokotela angahlinzeka ngesibalo esincane se-acetylsalicylic acid esigulini ukuvikela ukwakheka kwezigaba zegazi. Ukuphathwa okunjalo kufanele kwenziwe isikhathi eside. Ukudla njalo kwe-aspirin kunomthelela ekujezisweni okuthile kokujikeleza kwegazi futhi kunciphise ingozi yezinkinga eziyingozi.
Ukuzelapha ngokwakho kwe-atherosclerosis kuphambene ngokuphelele! Kungaholela emiphumeleni eyingozi kakhulu.
Uma izindlela zokwelashwa ezinqabile ezingenhla zingalethi imiphumela elindelekile, khona-ke umbuzo wezindlela zokuhlinza uyacatshangelwa. Kulokhu, udokotela angakunquma izinhlobo ezinjalo zokuhlinzwa njengokulandelayo:
I-Carotid endarterectomy. Ngokuvamile kwenziwa kusetshenziswa izinzwa ezijwayelekile. Ngemuva kokuthi udokotela enze i-incision encane, kukhishwe i-plaque.
I-balloon angioplasty yenziwa ezimweni lapho i-endarterectomy is contraindication. Ukusebenza okunjalo kunobulungiswa uma i-plaque ye-atherosulinotic isendaweni enzima. Lokhu kungenelela kungenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo.
I-Stenting ukuthi i-artery ihlatshwa ethangeni noma ehlombe. I-stent bese ifakwa ku-lumen ye-carotid artery - into encane yensimbi. Inwebeka ngokukhanyisela kwesitsha futhi ivumela ukuhamba kwegazi okujwayelekile.
I-Angioplasty iyindlela yokwelapha entsha namuhla. Umphumela wayo emithanjeni yegazi nasemzimbeni wonke usengumbandela wokucwaningisisa kahle. Kodwa-ke, ezigulini ezinobungozi obukhulu bezinkinga, lezi zinhlobo zokusebenza zibonisa ukusebenza kwazo.
Mayelana nokwelashwa okuhlukile nokuvinjelwa kwezifo
Ukulandela nje ukudla okhethekile kunesizathu kuphela ezigabeni zokuqala. Ngaphezu kokushintshela ekudleni okusiza, kuzosiza kakhulu ukulandela lezi zincomo:
Yidla kuze kufike ku-1 kg yama-cherries ngosuku (kungcono ukuwaphuza ngobisi).
Kuyasiza ukudla ama-currants amnyama, ama-plums, isitshalo seqanda, ikhabe.
Ushukela ungadliwa, kepha kuphela ngamanani amancane kakhulu.
Imenyu kufanele ibe negalikhi eningi no-anyanisi.
Esikhundleni setiye elimnyama elijwayelekile, udinga ukuphuza iziphuzo ezivela emacembe ama-blackcurrant, ama-sitrobheli, ama-blueberries, izithelo ezomisiwe.
Ama-Walnuts, ummbila kanye namafutha omnqumo asiza ukususa i-cholesterol "embi".
Ama-Decoctions netiye kusuka ku-lemon balm, i-hawthorn yenza ngokwejwayelekile ukucindezela.
Izindlela ezinjalo zokwelapha zisebenza kuphela uma lesi sifo singakahambi kude. Uma kunesidingo sokuhlinzwa, kumele senziwe ngokushesha okukhulu.
Phakathi kwezindlela zokuvimbela, kubalulekile ukugqamisa okulandelayo:
ukunqamuka ngokushesha kokubhema nokuphuza utshwala,
ukulungiswa kwesisindo somzimba
ukuqapha kwengcindezi yegazi noshukela wegazi.
Ukuvimbela i-pathology enjalo kulula kakhulu kunokuyelapha. Ezimweni eziningi, ukungenelela kokuhlinzwa kuyanconywa ukubuyisela ngempumelelo ukujikeleza okujwayelekile.
Isifo Sikashukela: ubani osengozini?
Ivelaphi i-cholesterol ephezulu?
I-Hypertension 2 degrees: ingozi 2, 3 no-4
UkuxilongaAmamitha kashukela egaziIsifo sikashukela nezinsoUkudla ngesifo sikashukelaIsifo sikashukela kubantu besifazaneAma-sweetenersUkwelashwa nokuvimbelaIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniUkwelashwa okuhlukileImibuzo
I-Ofloxin 200 (Ofloxin® 200)
Isifo sokuphuza sikashukela samaphoyisa